Akhbaar sax ah iyo warbixin tayo sare leh waxay muhiim u yihiin maaraynta khayraadka biyaha iyo dhulka. SWALIM (mashruuca maareynta macluumaadka biyaha iyo dhulka Soomaliya) wuxuu guulo waaweyn ka sameeyey in la kordhiyo tirada iyo tayada xogta aasaasiga ah iyo macluumaadka la heli karo dhulka iyo biyahagudaha Soomaliya.
Fogaan ka Daalacasho
Fogaan ka Daalacasho waa qalab awood badan oo suurogelin kara falanqayn tifaftiran ee dhulka oo qiyaas oo lixaad weyn si loogu isticmaalo kormeeridda deegaanka heer gobol iyo / ama dal. Macluumaadka lagala soo baxo sawirrada dayax-gacmeedyada waxay lagama maarmaanka macluumaadka lagu qorsheeyo dhulka, qiimeynta joogta ee khayraadka dabiiciga, digniinta hore ee musiibada iyo maaraynta, iyo hawlo kale.
Hawlaha horumanta awoodda ee SWALIM qabato waxay dhammaan abaarayaan sadex dhinac oo ah qaabka horumarinta awoodda, i.e. shaqsiyaad, ururro iyo deegaan suurogeliya. SWALIM waxay doonaysa in ay si wadajir u xoojiso saddexdaas dhinac si ay u hirgasho awood meel mar ka noqota gudaha hay'adaha Soomaaliyeed ee maareynta khayraadka dhulka iyo biyaha.
Taageeridda maareyn kheyraad biyaha oo waarikarta
Horumarinta ilo cusub ee kheyraadka biyaha dhulhoose ee gudaha Soomaaliya waxaa ku gudban caqabado. SWALIM waxay si dhaw ugala shaqaynaysay Maamullada Biyaha ee Dawladda Soomaaliya iyo Kooxda WASH(Biyaha , Fayadhowrka iyo Nadaafadda) ee Qaruumaha Midoobay sida loo horumarinyo nidaamyo lagula socodo ilaha biyaha Soomaaliya.
Isticmaal waara ee biyaha
Biyo waa nolol! Mashruuca SWALIM wuxuu hormarshay habab lagula socdo Biyaha dhusha iyo biyaha dhulhoose ee gudaha Soomaaliya si loo taageero qorshaynta,Horumarinta, iyo ka faa’idaysi waara ee ilaha biyaha aadka u yar oo qiimaha badan u leh dalka.
Sahan Biyojooloojieed ee Soomaaliya
Inkasta oo biyaha dhulhoose ay yihiin isha biyaha ugu muhiimsan ee dadweynaha,Beeraha iyo xoolaha, hadana ma jirto gudaha Soomaaliya Khariidad biyojooloojiyeed iyo siyaad suuban oo lagu maareeyo biyaha dhulhoose iyo sahminta gudaha Soomaaliya. SWALIM waxay fulisay tirokoob iyo qiimeynta kheyraadka biyo-dhulhoose Ku jira ee Soomaaliland iyo Puntland, misna waxa dejisay hanaan lagula socodo heerka biyaha-dhul-hoose.
Kheyraadka Dhulka Soomaaliya
Khayraadka dhulka Soomaaliya waa kala duwan yihiin oo noocyo badan yihiin. Xogta ugu dambeysa warbixin ku saabsan khayraadkaan, waxay xaqiijinayaan go'aamo xambaarsan macluumaad ku saabsan maaraynta iyo isticmaalka,dabadeedna ay dammaanad qaadayaan inay u hari doonaan,daryeelka jiilalka mustaqbalka.
Somalia water sources livemap (SWIMS)
Somalia climate data series and Ground water
SWALIM Drought Monitoring Tool
Somalia Floods dashboard
Somalia spatial data portal
Somalia national river flow archive
PROSCAL Charcoal Sites
Mashruuca Maareynta Macluumaadka Biyaha iyo Dhulka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay barnaamijyada tirada yare ee horumarinta ee Qarammada Midoobay (UN) si loo helo maareyn macluumaad sida hawgalkeeda aasaasiga ah, iyadoo la isticmaalayo farsamooyin sida Hababka Macluumaadka Joqraafiga (GIS), Khariideyn dareeme fog iyo xog uruurin loo adeegsado aaladaha teleefanka gacanta iyo dabaqaadaha mareeg casri. http://bit.ly/2r9Fyz2
Markii labaad oo qura, 4 Oktoobar, 2016, SWALIM waxay munaasabad maalin bandhig ah ku qabatay gudaha caasimadda Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Wargelin SWALIM oo ku saabsan Dayactirka Qarkii Webiga ka Jabnaa Bayaxaaw
SWALIM hadda waxay si kalsooni leh ku warbixin karta in qarkii webiga ka jabnaa Bayaxaaw la xiray, bilowgii hore waxaa loo isticmaalay joonyado bacaad ah, marka mar dambe ayaa lagu xiray makiinado culus.
Isticmaalka khariidadda nool/xayiga ah ee helitaanka macluumaadka ilaha biyaha ee ka jawaabidda abaarta
Soomaaliya waxay la kulmaysay mid ka mid ah xaaladaha abaarta ugu daran muddoyinki dhawaa ee la soo dhaafay, ka dib markii xilliyo isku xigxiga ay roobabku liiteen guud ahaan dalka.
Meelaha Garanwaagu qabsaday ee Soomaaliland
Garanwaaga/Cali-garoob waxaa markii ugu horreysay horraantii 1950-naadkii Soomaaliya soo geliyey aagga tuulada Bullaxaar oo ku taalla xeebta Gacanka Cadmeed ee galbeedka Berbera nin dhir-beere ahaa oo Ingiriis ah oo lagu magacaabi jirey Mr. Dawson oo ka shaqaynayey mashruuc dhirayn ah, si loola dagaallamo nabaad-guurka, dabeylo siigada ah iyo dhaqdhaqaaqa ciid bacaadka ah (Ahmed Ibrahim Awale & Sugulle, A. Jama, Faafidda Prosopis juliflora ee Somaliland, (2006), Candlelight).
Khariidadda Xaaladaha Abaarta Bisha Abriil 2017
Qaybo badan oo ka mid ah dalka waxay guud ahaan ahaayeen qalayl bishii Maaraj 2017 oo idil iyadoo xaalado abaareed oo xad-dhaaf ah ay ku baahsanaayeen dalka qaybaha ugu ballaaran. Caadi ahaan roobabka Gugu waxay qaybaha Waqooyi Galbeed ka bilowdaan dabayaaqada Maaraj iyo bartamaha Abriil gudaha dalka intiisa kale.
SWALIM waxay siideynaysaa warbixinta ugu dambaysa oo ku saabsan Gebiyo-jajabyo Webi : Falanqayn daba socota masawirrada dayax-gacmeedkii ugu dambeeyey, qaar ay dhaw yihiin oo ay yihiin kuwii toddobaadkii la soo dhaafay (17 Sabteembar2016), SWALIM waxay siideysay farriin cusub oo ku saabsan xaaladda Webiyada Juba iyo Shabeelle ka hor roobab xilliyeedka Deyrta, kuwaas oo la filayo inay bilowdaan bartamaha Oktoobar (qiiyaas waqti saddex toddobaad ay naga xigto).
Toddobaakii la soo dhaafay waxaa la arkayey kororka roob-di’idda guud ahaan Soomaaliya. Meelo badan oo ku yaal dooxooyinka Juba iyo Shabeelle ee Koonfurta, waa la diiwaaniyey 50 mm ilaa 70 mm wadar ahaan.
Dhowrkii maalin oo dambe roob-di’iddii waa yaraatay guud ahaan Soomaaliya iyadoo xarumaha badankood ay diiwaangeliyeen roobab fudfud ama roob la’aan. Sidoo kaleb Buuraleyda sare ee Itoobiya qudheedu ma aysan diiwaangelin roobab macna leh.
Saadaasha dhawaan uu soosaartay Shirweynaha Saadaasha Cimilada ee Weyn Geeska Afrikada (GHACOF50), oo soo baxday 28 Agoost 2018, waxay tilmaameysa inay dhici karto in roobabka Deyta (Oktoobar- Diseembar) ay noqdaan caadi iyo kuwo sarreeya caadiga guud ahaan Soomaaliya.
Tobankii maalmood oo dambe waxaa ka jirey roobab aad iyo aad u culus gudaha qaar ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya oo sababay fatahaad iyo barkac ka dhacay gudaha dhawr meelood.